ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၃၀-၁၁-၂၀၁၂ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၃၀-၁၁-၂၀၁၂ - ညပိုင်း)
- လက်ပံတောင်း ဖြိုခွင်းမှု ပြည်တွင်းပြည်ပ သံဃာများ ဆန္ဒဖော်ထုတ် click
- သပိတ်စခန်း အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ ဆက်လက်ဆန္ဒပြ click
- သပိတ်စခန်း အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုကို မန္တလေး သံဃာတော်များ ကန့်ကွက်သပိတ်မှောက် click
- လက်ပံတောင်းအရေး ရန်ကုန်၊ ဆူးလေတွင်လည်း ဆန္ဒပြနေ click
- ရန်ကုန်မြို့ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီရှေ့တွင် ရဟန်းရှင်လူများ ဆန္ဒပြ (ဓာတ်ပုံ) click
- လက်ပံတောင်း အကြမ်းဖက်မှုအပေါ် ရန်ကုန်တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော် (အသံနှင့် ဓာတ်ပုံ) click
- လက်ပန်းတောင်းသပိတ် ဖြိုခွဲမှု ထိုင်းနိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြ click
- လူမဆန်စွာ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှု ရပ်တန့်ရန် ဘန်ကောက် မြန်မာသံရုံးရှေ့ သံဃာတော်များ ဆန္ဒပြ click
- လက်ပံတောင်း အကြမ်းဖက်မှုတရားခံ ၅ ရက်အတွင်း ဖော်ထုတ်ပေးရန် မန်းသံဃာများ ဆန္ဒပြ click
- ၅ ရက်အတွင်း အရေးမယူပါက ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံ ဆောင်မည်ဟု ဦးဝီရသူ မိန့်ကြား click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးသာအေး၊ ဝမ်ပေါင်နှင့် ဒေသခံများကို တွေ့ဆုံ click
- လက်ပံတောင်းတောင်သပိတ် ဖြိုခွဲမှုအပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဝေဖန် click
- လက်ပံတောင်းအရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တောင်းဆို click
- လက်ပံတောင်းအရေး ကော်မရှင် အမြန်ဖွဲ့ စစ်ဆေးမည် click
- ပြည်သူတွေရဲ့ အမေးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောပေးမယ် ဆို click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြေးနီတောင်စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းစာရှင်းလင်း (ရုပ်သံ) click
- ကံကုန်းရွာတွင် ပြောကြားခဲ့သည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိန့်ခွန်း (ရုပ်သံ) click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းဘေး ညောင်ပင်ကြီးဆိပ် သောင်ပြင်တွင် မိန့်ခွန်းပြော (ရုပ်သံ) click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းဘေး ညောင်ပင်ကြီးဆိပ် သောင်ပြင်တွင် မုံရွာဒေသခံများနှင့် တွေ့ဆုံ (ဓာတ်ပုံ) click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မုံရွာဆေးရုံမှ သံဃာတော်များအား သွားရောက် အားပေး (ဓာတ်ပုံ) click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မုံရွာဒေသခံများနှင့် တွေ့ဆုံ (ဓာတ်ပုံ) click
- မေတ္တာသုတ်ရွတ်ရင်း မီးလောင်ခဲ့ရသူ click
- သံဃာရဲ့ ဒဏ်ရာ ဘာကြောင့်လောင်လဲ မသိဟု ဆေးရုံအုပ်ကြီး ပြော click
- လက်ပံတောင်း ဒဏ်ရာရသူများ ကုသရေး စိုးရိမ်နေရ click
- လက်ပံတောင်းသပိတ်မှာ ဒဏ်ရာရသူများကို နယ်ပယ်အသီသီးက ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံအားပေး click
- လက်ပံတောင်းတောင်ပဋိပက္ခ နောက်ဆုံးအခြေအနေများ click
- လက်ပံတောင်းကြေးနီစီမံကိန်း ဆက်လုပ်ရေး အခြေအနေ ဖန်တီးပေးရန် တရုတ် တောင်းဆို click
- လက်ပံတောင်းအရေး တရုတ်သံရုံးက ကြေညာချက်ထုတ် click
- ထုတ်ပြန်ပြီးမှ ပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် click
ကြေးနီစီမံကိန်း ဆန္ဒပြသူများအား ဖြိုခွင်းပြီး မနက်ပိုင်း အခြေအနေ (ရုပ်သံ) click
- လက်ပံတောင်း အင်အားသုံး ဖြိုခွင်းမှုကို ဒီလိုမြင်ကြတယ် - ၂ (အင်တာဗျူး) click
- လက်ပံတောင်းဖြစ်စဉ် အကျဉ်း click
- “ဒဏ်ရာတွေကို ဖုံးဖိထားလို့ မရဘူး” (အင်တာဗျူး) click
- မြစ်မရရင် တောင်ကို ချိန်မယ် (ကာတွန်း) click
- မီးလောင်ဗုံး မသုံးဘူး (ကာတွန်း) click
- လက်ပံတောင်းက အားလုံး ငိုရတဲ့ ဗုံး (ကာတွန်း) click
- ကျောက်ဖြူ ရခိုင်အိမ်ထောင်စု ၆၅ စု အိမ်ပြန်လည်ဆောက်ခွင့်မရ click
- စစ်ကိုင်းတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသာအေးအလှူ သံဃာများ ပယ်ချ click
- လာဘ်စားမှုများကို ပြည်ထဲရေးဌာန ကိုင်တွယ်အရေးယူမည် click
- ဗီယက်နမ်–မြန်မာ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စာချုပ်ချုပ်ဆို click
- ၈၈ တို့၏ တနင်္သာရီခရီးတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပြည်သူ့အကျိုး အဓိက ဆွေးနွေးရ click
- ၈၈ မျိုးဆက် ကော့သောင်း၊ ဘုတ်ပြင်း နိုဝင်ဘာ ၂၈ ခရီးစဉ် (ဓာတ်ပုံ) click
- ၈၈ မျိုးဆက် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း တနင်္သာရီခရီးစဉ် ပြီးဆုံး (ဓာတ်ပုံ) click
- စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းတခုကို အစိုးရတပ်ဖွဲ့က မီးရှို့ click
- တိုက်ပွဲ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေမှုကို ဖြေရှင်းရခက်ခဲနေသော RCSS ပြဿနာ click
- UWSA ဌာနချုပ်သို့ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း သွားမည် click
- စစ်တမ်းကောက်ယူချက်အရ ၈၀% ကျော်က သျှမ်းအဖွဲ့အစည်းအားလုံး တစုတစည်းတည်း ရှိစေချင် click
- ရှမ်းငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲအပေါ် ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် မေးမြန်းချက် (အသံ) click
- ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ) ရဲ့ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံ ကျင်းပ click
- မိုဘိုင်းဖုန်းအင်တာနက် သုံးစွဲခ စနစ်သစ် ပိုပြီး သက်သာဟု ဆက်သွယ်ရေး ပြော click
- ၂၀၁၃ ခုတွင် ထိုင်းရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများ တနေ့လုပ်အားခ ဘတ် ၃၀၀ ရမည် click
- မြန်မာအလုပ်သမားအရေး ဒု-ဝန်ကြီး ဆွေးနွေး (ရုပ်သံ) click
- မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု များလာတဲ့အတွက် မိဘများ စိုးရိမ်ပူပန်နေကြရ click
- ငွေစာရင်း မရှင်းနိုင်သဖြင့် ကျေးရွာ လျှပ်စစ်မီးလင်းကော်မတီ တိုင်ကြားခံရ click
- ငါးအမှုန့်ကြိတ်စက်ရုံများ ဂေဟစနစ်ကို ပျက်စီးစေကြောင်း ဒေသခံများ တိုင်ကြား (ဓာတ်ပုံ) click
- နယူးယောက်က Miss Myanmar Nida Taylor (ယမုံမိုး) နဲ့ စကားပြောခြင်း click
- လှေစီးပြေး မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်များအကြောင်း တစေ့တစောင်း (ဆောင်းပါး) click
- ပျူလူမျိုးနှင့် ပျူနိုင်ငံတော် စာတမ်းဖတ်ပွဲ ကျင်းပ click
- ပျူစာတမ်းဖတ်ပွဲအပေါ် မော်လမြိုင်မှာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ် click
- ဆရာမ ရိုက်လို့ ကျောင်းသား ကျောက်ပတ်တီး ကိုင်ရ click
- စဉ်းစားသုံးသပ်စရာ လိုပြီဖြစ်သော တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း မေးခွန်း click
- ပညာရေးကောင်းလာစေဖို့ (ဆောင်းပါး) click
- အမေရိကန်တက္ကသိုလ်ကိုးခု မြန်မာတက္ကသိုလ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည် click
- အိုင်ယာလန်မှာ အိန္ဒိယအမျိုးသမီး သေဆုံးမှုကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတဲ့ ဥပဒေငြင်းခုံဆွေးနွေးမှု ထပ်ပေါ် (အသံ) click
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 8:58 PM
In her book, Dinner with Mugabe, Heidi Holland describes Mugabe as behaving in ways “typical ofaspoilt child when told he cannot do as he pleases,” and again, Than Shwe is quite similar. Their common attitude is to wave their fist at the world and vow “I’ll do what I want and you see if you can stop me. I want it my way and if you won’t give it to me, I’ll show you! You’ll see what I can do!”25 The casualties of both men’s narcissism include not only human lives destroyed and misery wrought upon an entire nation, but the destruction of the understanding of right and wrong, truth and lies. Right and wrong are so confused, Holland writes, that the listener “cannot identify the moral line any longer”26 . And yet to the observer, while Solzhenitsyn was right that the line between good and evil passes through every human heart, men like Than Shwe and Mugabe appear to havearemarkable ability to simply block out, justify, or remain indifferent to the moral implications of their actions.
Some international observers find it difficult to reconcile the teachings ofareligion focused on peace and spiritual enlightenment with the brutal practices carried out by Than Shwe’s military regime, given how strongly Than Shwe and other Generals identify with Buddhism. The explanation is quite simple – Than Shwe justifies attacks on monks in his own mind by either labelling them “bogus” 46 monks, or by disrobing them 47 At the same time, military officials use the blanket of Buddhism to defend, and deny, their own human rights abuses. One seasoned advisor to the U.S. Embassy in Burma in the 1970s and 1980s said, “I once hadameeting withageneral in Burma and
pressed him about the killings of political dissidents. Instead of responding to my question, he simply denied everything, saying ‘We’re Buddhist, we don’t kill.’”
U Aung Zay-Ya No2must come and take his position as soon as possible. Aung Zay-Ya must come from Mon-ywar and ShweBo or Sagaing Division.